Maal gasho Qalabaynta Suuq-geynta Ganacsiga Klaviyo Maanta Kahor Xilliga Dukaameysiga Fasaxa | Martech Zone
Maal gasho Klaviyo's Qalabaynta Suuqgeynta Ecommerce Maanta Kahor Xilliga Dukaameysiga Fasaxa
Arbacada, Oktoobar 14, 2020 Arbacada, Oktoobar 14, 2020 Douglas Karr
Sanadkii la soo dhaafey, waxaan uqaatey mas'uuliyadaha suuq geynta macmiilka ecommerce inuu kobciyo iibkooda. Waxaan ku fiicnaaday dhinac kasta oo ka mid ah boggooda e-commerce - kiiskan, Soo iibso. Waxaan dib-u-habeeyay qaab-dhismeedyo, waxaan ku daray barnaamij abaalmarin ah, waxaan ku daray gaarsiinta maxalliga ah, waxaan soo qaaday sawirro cusub oo badeecado ah, bogagga wax soo saarka oo la wanaajiyay… waxaana kordhiyay sicirka beddelaadooda oo ah laba lambar.
Markii aan awooday inaan hubiyo in goobta ay si sax ah u shaqeyneyso oo saadka wax bixinta ay shaqeyneyso, waxaan doonayay inaan ka shaqeeyo kordhinta guud ee dakhliga. Hirgelinta xalka otomatiga suuq geynta ee emaylka ama fariimaha u dira macaamiisha kuna dhiiri galiyay inay dhameystiraan iibsiga ama ku sasabtaan inay bilaabaan amar cusub ayaa muhiim ahaa.
Nasiib darrose, qalabyada Shopify aad ayey uga maqan yihiin halkan. Shopify waxay awood u leedahay inay habeyso qaar ka mid ah gawaarida dukaameysiga iyo emayllada kale - laakiin dhab ahaantii ma jiraan wax sirdoon ama warbixin adag oo ku xeeran. Tusaale ahaan, ma aanan haynin wax kala qaybinta iyo dirista dalabyo ku saleysan taariikhda wax iibsiga ama astaamaha macaamiisha kale.
Qalabaynta Suuq-geynta Klaviyo Ecommerce
Ka dib markii aan baaritaan ku sameeyay khadka tooska ah, waxaan go'aansaday inaan tijaabiyo Klaviyo. Saacad gudahood, waxaan wax ka beddelay qulqulka qalabkooda suuqgeynta ee caadiga ah si aan u soo dhoweeyo macaamiisha cusub, daalacashada laga tagay oo aan alaabtii ku darin gaadhigii, macaamiisha gaadhigii dukaamaysiga ee la iska dhaafay, dib u macaamil macaamilkii, iyo isweydaarsi / iibsi / isweydaarsi otomaatig ah oo loo habeeyay oo loo dirayo.
Is dhexgalka Klaviyo iyo Soo iibso waa cajiib. Waxay awood u yeelatay inay ku xirnaato Shopify iyo dheef-shiidka dhammaan macluumaadka macaamiisha, isla markiiba waxay fulisaa dhowr qulqulo oo la hagaajiyay. Bishii ugu horreysay, isgaarsiinta aan naqshadeeyay oo aan dhisay anigoo adeegsanaya tifaftiraha emaylkooda iyo hoos u dhigid (Dukaan ma laha midkood) soo noqoshada maalgashiga 2286% kharashka nidaamka. Maya… Halkaas kuma kaftamayo.
Isku-darka Klaviyo ee Shopify wuxuu noo ogolaanayaa inaan si habsami leh oo wax ku ool ah u fulino istiraatiijiyadeena suuq-geynta dijitaalka ah haddii ay tahay kala qaybsanaanta habdhaqanka ee iibsadayaasha soo noqnoqda, jiilka hogaaminta ama socodka otomaatiga ah.
Mike, Maamulaha Shirkada Bobo
Klaviyo iyo Shopify, waxaad ku bilaabi kartaa dirida isgaarsiin shaqsiyadeed, sifiican ujeedo leh daqiiqado gudahood. Klaviyo waxay si aan kala go 'lahayn u ururisaa oo u kaydisaa dhammaan macluumaadka khuseeya macaamiishaada si aad ugu adeegsan karto si ay kuugu gudbiso khibrado xusuus leh, u waddo iibsiyo badan, iyo inaad abuurto xiriirro adag.
Klaviyo's Shopify Ecommerce Integration Waxaa ku jira
Dashboard - Ka sokow otomatiga suuqgeynta, Klaviyo waxay bixisaa dashboard adag oo e-commerce ah oo si buuxda loo habeyn karo waxayna siisaa faahfaahin kasta oo dukaankaaga Shopify ah waqtiga-dhabta ah.
Iskuduwaha Suuqgeynta - Kicinta qulqulka ee ku saleysan taariikhaha, dhacdooyinka, liiska xubinnimada, ama xubinnimada qeybta oo isticmaal kala qeybsanaan, miirayaal, imtixaannada A / B, iyo in ka badan si loo bartilmaameedsado oo loo wanaajiyo. Si dhakhso leh ugu bilow maktabadda dukaamaysiga gaarka ah ee dukaamaysiga iyo moodellada emaylka.
Ku Laabo Digniinta Alaabada - Alaabooyinka keydka ka baxaa ma ahan iib lumay. U oggolow macaamiisha inay iska diiwaangeliyaan digniinta marka alaabtu ku soo laabanayso keydka - way fududahay.
Talooyinka Wax Soosaarka Gaarka ah - Si sahlan loo isticmaalo, talooyinka wax soo saarka eber-dejinta ee ku saleysan macaamiisha, iyo taariikhda iibsiga.
Ololayaasha - Uma baahnid inaad soo dirto qulqulka otomaatigga suuqgeynta, waxaad u diri kartaa emayl ama olole farriin qoraal ah markasta oo aad jeceshahay qeybta aad rabto.
Imtixaanka A / B - Tijaabi khadadka mawduucyada emaylka iyo waxyaabaha si fudud si toos ah ugu dhex jira nidaamka otomaatiga suuqgeynta.
Qeybta Macaamiisha - Qeex qaybaha aan xadidnayn. Isticmaal isku-darka dhacdooyinka, guryaha astaanta u ah, goobta, qiimayaasha la saadaaliyay, iyo in ka badan… wakhti kasta.
Kuuboonada firfircoon - Si fudud ugu dir macaamiishaada rasiidh shaqsiyeed.
Bogaga Xulashada - Calaamadee oo habeyn emaylkaaga jawaabta leh iyo bogagga doorbidka macaamiisha moobiilka.
Sirdoonka Artificial - Saadaalinta si otomaatig ah loo soo saaray ee loogu talagalay qiimaha nolosha, khatarta qatarta, jinsiga, waqtiga dirista ugufiican, iyo sanaadiiqda talooyinka alaabada shaqsiyeed.
Ecommerce Suuq-geynta Suuqa - U gudbi samaynta foomam summadaysan si aad u dhisto liiskaaga suuq geynta. Ka dib, la macaamil macaamiisha iyada oo loo marayo wadiiqooyin kala duwan oo u isticmaal saadaalinta si aad u saadaaliso qulqulka ama bartilmaameedka macaamiisha qiimaha sare leh.
Kobcinta xogta alaabta Si otomatig ah u waafaji astaamaha wax soo saarka meesha wax lagu iibsado, amarada dhacdooyinka, iyo diiwaanada diiwaanka.
SMS - Ka faa'iideyso qeybinta xoogga leh iyo otomaatigga si loo shakhsiyeeyo farriin kasta oo qoraal ah. Maareynta ogolaanshaha waa mid fudud oo otomaatig ah si loo hubiyo in farriimaha loo diro dadka saxda ah.
Bilaw Klaviyo Bilaash!
Isku-darka Ecommerce ee hal-gujinta Klaviyo
Klaviyo waxay leedahay in ka badan 70 horay loo sii dhisay, hal guji oo isku dhafan oo lagu daray APIs furan si loo hubiyo inaad si fudud ugu heli karto xogtaada ganacsi Klaviyo dhib la'aan. Isku-dhafka e-commerce ee wax soo saarka leh ayaa la heli karaa si aad u kiciso oo aad u shaqeyso isla markiiba adoo isticmaalaya:
Soo iibso iyo ShopifyPlus
Shaacinta: Waxaan u adeegsanayaa xiriiriyeyaal ku xiran maqaalkan.
Tags: otomaatiga socodkacaleemaha ka tagCLVqiimaha nolosha macaamiishaecommerce aiotomatiga ecommercee-commerce iibinta iibinta emaylkadashboard ecommerceololayaasha emayl e-commercekala soocida ecommerceecommerce soo dhawow emaylkaemayl ab imtixaanKlaviyomagentoiibsashada saadaasha ahdukaamaysiga ab imtixaankaiibso rasiidhdukaamaysiga otomaatiga suuq geyntaduudduubotomaatiga suuq geynta smsdigniinta saamiyadawoocommerce